Yekupedzisira Amazon FBA uye Kudonhedza Master Kirasi Bundle inotsanangura zvese zvaunoda kuziva kuvhura, stock, manejimendi uye kukura inokura Inozadzikiswa neAmazon bhizinesi.
ne admin pane 20-08-11
Yekupedzisira Amazon FBA uye Kudonhedza Master Kirasi Bundle inotsanangura zvese zvaunoda kuziva kuvhura, stock, manejimendi uye kukura inokura Inozadzikiswa neAmazon bhizinesi. Semunhu ane makore gumi nemashanu muKosovo, Engjell Berisha akanyengerwa nemikana yekuita mari yekudonhedza, kutengesa zvigadzirwa kubva ku ...
Mumakore mashoma apfuura, iyo inodonhedza modhi yebhizinesi yakaona kuwedzera kukuru.
Mumakore mashoma apfuura, iyo inodonhedza modhi yebhizinesi yakaona kuwedzera kukuru. Nekuziva kwakawanda uye ruzivo muchanza chemaoko edu, nyika yave musha wepasi rose. Kune munhu anoratidza kufarira, hazvina kuoma kutanga bhizinesi chero ripi zvaro. Uye kubva pakudonhedza h ...
NextsChain iri mune imwe chete mhinduro yekudonhedza shopu, amazon uye ebay.
Mushure memwedzi mipfumbamwe yekuedza, isu lanuch NextsChain. Nesystem yedu, unogona kubatanidza zvimwe zvitoro zvitoro imwe account, izvo zvinoita kuti zvive nyore kubata ako ese mashopu ezvitoro mune imwe account uye nenzvimbo imwe. Kunze kwezvo, isu tiri kupa mazana mana emakumi emhando yepamusoro zvigadzirwa zvekutengesa nekutumira nekukurumidza. Ndokumbira utarise kuti chii ...